Prakash Khabar:: सार्वजनिक जग्गा जोगाउन अभियान चलाएकी छु Prakash Khabar
November 7, 2019 | 83 Views
शोभा सापकोटा, अध्यक्ष, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्वर १४
काठमाडौं महानगरपालिकाको ३२ वडाहरुमध्ये १४ वडामा मात्र महिला अध्यक्ष निर्वाचित भएकी छन–उनी हुन शोभा सापकोटा । उनले यो वडामा गरेको बिकास निर्माणलगायत अन्य सामाजिक कामहरु मुलुकभरका नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकाको लागि प्रेरणाको श्रोत बन्नसक्छ । काठमाडौं महानगरका ३१ जना निर्वाचित वडा अध्यक्षहरुको भन्दा फरक क्षमता र काम गरेर राजधानीका जनताका मन जित्ने ध्याउन्नमा उनी लागेकी छन । उदाहरणस्वरुप कंलकी चोकमा निर्माण भएको अण्डरपास सडकलाई नै लिन सकिन्छ । आफुहरु निर्वाचित भएर आएको समयभन्दा यो वडाको अहिलेको अवस्था आकाश जमिनको फरक भईसकेको छ । सडक, खानेपानी, ढल, फोहोर व्यवस्थापन, सडक बत्ति, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उनको भनाई छ । वडाबासी जनताले यस कार्यालयबाट पाउनुपर्ने सेवा सुबिधामा पारदर्शीका र साथै व्यापक सुधार गरेको उनले बताइन । यी लगायत समसामयिक, आगामी रणनीति, भावी योजनामा केन्द्रित रहेर प्रकाश साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले गरेको कुराकानीको मुख्य अंश :
वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएर आएपछि के के कामहरु गर्नुभयो ?
लामो समयको रिक्ततापछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको कुरा सम्पुर्ण नेपाली जनतालाई थाहा नै छ । कर्मचारीले नै लामो समयसम्म स्थानिय निकायको नेतृत्व गरेर सञ्चालन गरे । त्यो समयमा जनप्रतिनिधि नहँदा जनचाहानुअनुसारको काम हुन नसकेको पक्कै हो । कर्मचारीको पालामा धेरै बिकास निर्माणका धेरै काम हुनसेको थिएन । धेरै कुराको अभाव पनि थियो । हामी निर्वाचित भएर आएसँगै वडाबासीको समस्याहरु र चाहानाहरु पनि स्वत थपिदै गए । हामी आउँदा कंलकी चोकको हालत अत्यन्तै दयनिय थियो । कंलकी चोक पार गर्न चार–पाँच घण्टासम्म जाममा बस्नुपर्दथ्यो । डां बाबुराम भटटराई प्रधानमन्त्री हुँदा सडक फराकिलो पार्न भत्काईएको संरचना हामी निर्वाचित भएर आउँदासम्म अस्व्यस्त र असरल्ल थियो । बाटो बन्न सकेको थिएन । कतिसम्म भने टयाक्सीलाई कंलकी जाउँ भन्यो भने जान नमान्ने अवस्था थियो । के सम्म भयो भने चितवनबाट काठमाडौं ल्याउँदा एकजना सुत्केरी बिरामीको जामका कारण निधन एबुलेन्स भित्र नै भयो । त्यसपछि मैले बाटोको ठेक्का लिने ठेकेदार र सडकको इञ्जिनियरलाई बोलाएर छलफल गरें । के कारणले काम रोकिएको हो । उनीहरुले संघर्ष समितिले काम गर्न बाधा पु¥याएको गुनासो गर्नुभयो । यस वडाको जनप्रतिनिधिको हैसियतले मैले दुवै पक्षलाई राखेर सहमति गराउन प्रयत्न गरें । संघर्ष समितिको माग सडकमा परी भत्केका घरले क्षतिपुर्ति पाउनुपर्छ भन्ने माग रहेछ । त्यो नपाएसम्म सडकको काम गर्न नदिने उनीहरुको अडान थियो । मैले उनीहरुलाई सरकारले नीति बनाएर क्षतिपुर्ति दिने भन्यो भने त्यसको लागि म तपाईंहरुको साथमा लडछु भने । त्यसपछि उनीहरु पनि सहमतिमा आए सडक निर्माणको काम अगाडि बढयो । कंलकीको मन्दिरबाट निर्माणको काम पुन शुरु भयो सम्पन्न पनि भयो । यो म्यासेज उपत्यकाभरी नै गयो । रोकिएका सडकको काम अगाडि बढयो । अहिले कंलकीको स्वरुप र मुहार नै बदलिएको छ ।
दैनिक कार्य सञ्चालनको लागि तपाईंहरुको वडा भवन नै छैन हैन ?
वडा कार्यालय भवन नभएकै कारण स्थानीयबासीलाई सेवा लिन धेरै समस्या थियो । हामी निर्वाचित भएर आएपछि भवनको लागि जग्गा खोज्यौ । जग्गा प्राप्त गरेपछि अहिले भवन बनाउने काम धमाधम भइरहेको छ । पाँचतल्लाको यो भवन सेवाग्राहीको सेवा सुबिधालाई मध्य नजर अत्याधुनिक र सुबिधा सम्पन्न हुनेगरी निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यो वडामा खानेपानी व्यवस्थापनका बारेमा के पहल गर्नुभएको छ ?
म जनप्रतिनिधि मात्र नभएर एक गृहणी महिला पनि हँु । घरमा पानी नहुँदा कस्तो समस्या भोग्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई राम्ररी ज्ञान छ । हामी निर्वाचित भएपछि कंलकी नजिकैको खडका गाउँमा बोरिङ गरेर पानी निकाल्यौ । २ लाख ५० हजार लिटरको अन्डर ग्राउण्ड टयांकीको निर्माण ग¥यौ । स्थानीय खानेपानी समिति, वडा कार्यालय र प्रदेश सरकारको बजेटबाट यो निर्माण भएको हो । अब पाइपलाइनको काम हुन बाँकी छ । त्यो कामको जिम्मेवारी पनि तोकिइसकेको छ । बोरिङ सञ्चालनमा आएर पानी बितरण हुनथालेपछि खानेपानीको समस्या केही हदसम्म समाधान हुनेछ ।
फोहोर व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
हामी निर्वाचित भएर आउनु अगाडि फोहोर व्यवस्थापनको अवस्था पनि गञ्जागोल थियो । समयमा फोहोर नउठाउने, तर पैसा लिने काम मात्र भएको थियो । हामी निर्वाचित भएर आएपछि स्थानीय जनताहरु फोहोर समयमा उठाउनु प¥यो भन्दै डेलिकेशन नै आए । उनीहरुको माग बमोजिम नै समयमा फोहो नउठाउने संस्थालाई हटाएर नयाँलाई ल्यायौं । अहिले त्यो संस्थाले राम्रोसँग काम गरिरहेको छ । अहिले फोहोर व्यवस्थापन व्यापक सुधार भएको छ । समयमा फोहोर उठेको छ र जनता पनि खुशी भएका छन ।
वडाबासीको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्वास्थ्यमा चाँहि कसरी ध्यान पु¥याइरहनु भएको छ ?
वडाबासीको स्वास्थ्यमा पनि हामीले नजर पु¥याई नै रहेका छौं । कुमारी क्लव र कुलेश्वर आवास क्षेत्रमा रहेका क्लिनिकले सेवा दिइरहेका छन । त्यहाँ अब डाक्टरको व्यवस्था मिलाएका छौं र निशुल्क उपचार पनि हुन्छ । धनीमानी ब्यक्तिहरु त जादैनन नै सर्वसाधरणले भने निशुल्क रुपमा सेवा लिनसक्नेछन । यसभन्दा अगाडि पनि समान्य किसिमको प्राथमिक उपचार त भैरहेको थियो । अव यहाँ एमबिबिएस डाक्टरको व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।
सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा तपाईंहरुले खासै ध्यान नदिएको स्थानियहरुको भनाई छ, वास्तबिकता के हो ?
यसमा सत्यता छैन । यस वडाको बोर्डर खडपुले पुल नजिक एकजना मारवाडीले सार्वजनिक जग्गा मिचेर कम्पलेक्स नै बनाएको थियो । मैले त्यसलाई डोजर लाएर भत्काउन लगाए । म नै त्यस्तो पहिलो महिला वडा अध्यक्ष हुँ जस्ले स्वंम आफैं उपस्थित भएर डोजर लगाई सार्वजनिक जग्गामा बनाएको संरचना भत्काएं । त्यहाँ अहिले काँढे तारवार गरेका छौं । उसले साँढे तीनआना सार्वजनिक जग्गा मिचेको रहेछ । त्यो जग्गाको अहिले प्रति आना झण्डै ८० लाख मुल्य पर्छ । यी बाहेक अन्यत्र पनि सार्वजनिक जग्गा हडपेको कुरा बाहिर आएका छन । हामी खोजविन गरिरहेका छौं । यस वडाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाको खोजी जारी छ । प्राप्त भएका सार्वजनिक जग्गालाई हामी संरक्षण गर्दै जानेछौं ।
महानगरपालिकाभित्रका अरु वडाहरुले बालबालिका र बृद्धबृद्धाको लागि खेल मैदान र पार्क निर्माणमा जोड दिइरहेका छन, यसतर्फ तपाईंहरुको ध्यान किन नगएको ?
कुलेश्वर आवास क्षेत्रमा प्लानिङ गर्दा नै त्यसरी पार्कको लागि जग्गा छुटटाइएको छ । त्यहाँ बिचबिच खाली राखिएका जग्गालाई संरक्षण गरी हामीले पार्क निर्माण गर्दैछौं । त्यो एरियामा हामीले चार वटा पार्क निर्माण पनि गरिसकेका छौं । कंलकी मन्दिर नजिकै पनि साँढे तीन आना सार्वजनिक जग्गामा पार्क निर्माण गर्ने योजना अगाडि बढदैछ । स्थानीय जनसमुदायले त्यो जग्गामा भवन बनाउन माग गरेका थिए । मैले मानिन । किनभने ०७२ सालमा भुकम्प गएपछि सार्वजनिक ठाउँको अभावमा पीडितहरुले बस्ने ठाउँ पाएनन । त्यसकारण भवन भन्दा पनि खुल्ला ठाउँ नै राखेर पार्क बनाउनुपर्छ भनेर सल्लाह गरियो । अर्को कुलेश्वर महादेव मन्दिर नजिक रहेको करिव ७ रोपनी जग्गामा पनि राम्रै पार्क बनाउने योजनामा छौं । त्यसको डीपीआर पनि तयार भइसकेको छ । त्यो महानगरको हेर्न लायक र गतिलो पार्क हुनेछ । त्यसैगरी भुवनेश्वरी मन्दिर नजिकै पनि १८ रोपनी जग्गा छ । त्यहाँ अहिले पार्क र पुरानो भवन त छदैंछ । त्यस्लाई व्यवस्थित पार्क बनाउन वडाले ५० लाख बजेट पनि छुटटाएको छ । महानगरपालिकाले पनि चासो दिएर यसलाई नमुना पार्क बनाउन पहल गरेको छ । आन्तरिक र बाह्य पर्यटकको लागि यो पार्क धेरै उपयुक्त हुने अनुमान हामीले गरेका छौं । त्यहाँ झोलुङगे पुल पनि छ । त्यसलाई अझ व्यवस्थित बनाएर पर्यटकलाई आर्कषित गर्ने सोचाइ छ । त्यसको लागि अलि ठुलै रकम खर्चिनुपर्ने भएकोले बजेटको व्यवस्था गर्न पहल भइरहेको छ ।
तपाईंको पाँचबर्षको कार्यकाल मध्ये दुई बर्ष बितिसकेको छ, आगामी तीनबर्षभित्र यो वडालाई बिकास निर्माणमा कहाँ पु¥याउने योजना र लक्ष्य बोक्नुभएको छ ?
सर्वप्रथम १४ नम्वर वडाभित्रका सडक, गल्लीलाई हिलो र धुलो मुक्त बनाईने छ । सांघुर बाटोलाई सकेसम्म फराकिला बनाएर पिच वा व्लक छापिनेछ । खानेपानीको धारो नभएको घरमा धारा जडान गर्ने र ढल छैन भने त्यसको व्यवस्था गरिनेछ । धेरै काम त यो दुई बर्षको अवधिमा भइसकेको पनि छ । बाँकी रहेका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अरु काम गर्नेछौं । यसैगरी खडपुले पुलदेखि बल्खु खोलासम्मको करिव तीन किलोमिटर करिडोर सडक खोल्नेछौं । खोलाको दुवैतिर करिडोर खुलेपश्चात पिच गरेर त्यसको दायाँ बायाँको भागलाई हरियाली बनाउने छौं । त्यसपछि त्यसको लाभ करिडोर वरिपरिका स्थानीय जनताले लिनेछन ।